ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း) နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
နေရွှေသွေးအောင် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ဆက်ထားသမျှ
(နေရွှေသွေးအောင်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာအထက်ပါ ငွေစက္ကူစာရွက်နဲ့အတူ တင်ဆက်ထားပါတယ်၊ အဲသည်မှာ သူနဲ့ အထက်ပါ ခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်က အမှတ်တရထိုးထားပုံရတဲ့ လက်မှတ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။)
“တိုင်းပြည်အကျိုးကိုထိခိုက်ဆုတ်ယုတ်စေနိုင်သည့် အငြိုးအတေးနှင့်အာဃာတတရားများ မိမိတွင်လုံးဝမရှိ။ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အောင်မြင်စွာတည်ထောင်နိုင်ရေးနှင့် တပ်မတော်အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို“
“ရွေးကောက်ပွဲတွင်တရားဝင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်၏အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်လာမည်မှာ အားလုံးလက်ခံရမည့်အမှန်တရားပင်ဖြစ်။ သူမအနေဖြင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက မိမိအနေဖြင့်တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးကူညီမည်“
* ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း)နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ၄–၁၂–၂၀၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)၏နေအိမ်၌ နှစ်နာ
ရီခွဲခန့်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှီတင်းနေထိုင်လျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ..
ကျွန်တော်တို့၏အမိမြန်မာပြည်သမိုင်းကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးချိန်တွင် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအခြေအနေသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်ရှိခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရအပြည့်အဝရရှိသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် နယ်ချဲ့များ၏သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့မှုနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးသောပယောဂများကြောင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု တစ်စတစ်စ ပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီး တိုင်းပြည်ပြိုကွဲပျက်သုန်းမည့်အန္တရာယ်ကျရောက်လာသောအခါ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဦးဆောင်သော အစိုးရယန္တရားဖြင့်အစားထိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်ကိုအားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
မူလအစကတော်လှန်ရေးကောင်စီကို အမေရိကန်ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ယုံကြည်လေးစားစွာဆက်ဆံခဲ့ကြသော်လည်း ခေတ်နှင့်မလျော်ညီတော့သောစီးပွားရေးစနစ်များကို အချိန်မီပြောင်းလည်းပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့၍ ပြည်သူလူထု၏ အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်မှ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုတစ်ဖန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြန်ပါသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေရာအနှံ့အပြားတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်နှင့် အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်များကြား ယုံကြည်မှု မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့၍ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ပြည်သူလူထုအမြင်စောင်းမှုခံရ၊ အနိုင်ရပါတီဝင်များလည်း အရေးယူခံခဲ့ရပြီး တိုင်းပြည်သည်လည်းနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကြုံကြိုက်ခဲ့ရကာ နှစ်ပေါင်းအစိတ်ခန့်ထပ်မံ၍ တိုင်းပြည်အနေဖြင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပြန်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပပြီးစီးပြီဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပင် အစိုးရဖွဲ့နိုင်သောအနေအထားအထိ ထပ်မံအနိုင်ရခဲ့ပြန်ပါသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင် နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မသင့်မမြတ်ဖြစ်နေခြင်းထက် မာန်မာနများဖယ်ရှားပြီး တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကသာ တိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမည်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာများနှင့်ယှဉ်ကာ
ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သလို လက်တွေ့တွင်လည်း တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်အမှန်တကယ်အသုံးချ အကျိုးရှိစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေရာတွင် ကျွန်တော့်အဖိုး ဦးသန်းရွှေနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် ကျွန်တော့်၏အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြဆွေးနွေးလိုပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လူထုအများစုချစ်ခင်လေးစားသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်၍ သူ၏သြဇာအာဏာသက်ရောက်မှုသည် ပြည်သူလူထုအပေါ်အမြဲပင်လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အဖိုးသည်လည်းပဲနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ခန့် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လာသော တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၍ လက်ရှိအစိုးရခေါင်းဆောင်များသည်လည်း သူ့အပေါ် ဂါရဝတရားနှင့်လေးစားမှုကတော့ အမြဲပင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ငြိမ်းချမ်းသိမ်မွေ့စွာတွန်းတင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်သလို အနားယူစဉ်အချိန်ကတည်းကလည်းယခုအချိန်အထိ နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုများတွင် လုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အခိုင်အမာပြောနိုင်သကဲ့သို့ နီးစပ်ရာအစိုးရလူကြီးများကိုလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စဉ်အချိန်က တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် လူအထင်လွဲစေရန် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သောကောလဟလသတင်းများသည်လည်း ဟုတ်မှန်ခြင်းမရှိကြောင်း အောက်ပါလင့်တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်တင်ပြထားပါသည်။
ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရသောခေါင်းဆောင်နှင့် လက်ရှိအစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏ ဆရာသမားကဲ့သို့ဖြစ်နေသူတို့၏ တွေ့ဆုံမှုသည် အမှန်တကယ်ပင် အရေးကြီးကြောင်း လူတိုင်းသိပါသည်။ ကံကောင်းခဲ့လှသောကျွန်တော့်အနေဖြင့်နှစ်ရက်အတွင်း ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံမှုကို စာဖတ်သူများဗဟုသုတရရှိစေနိုင်ရန်အလို့ငှာ အကျဉ်းချုံးတင်ပြလိုပါသည်။
ထိုနေ့က နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ၁၈ ရက်နေ့ညကကျွန်တော်မနက် ၄ နာရီမှအိပ်ပျော်ခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းအနိုင်ရရှိထားသည့်ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့်တွေ့သည့်အခါ မည်သည့်စကားကိုစပြောရမည်လည်းကို အဖန်ဖန်ပြန်လည်စဉ်းစားနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပြီး လေဆိပ်မှ သူမနေအိမ်သွားနေသောလမ်းတစ်လျောက်သည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဘဝတွင် ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်တွေထဲကတစ်ခုဆိုတာ စာဖတ်သူများလည်းမှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာလက်ခံတွေ့ဆုံမည်ကိုသိသော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုင်ပင်ဘဲ မိမိတစ်ယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အန်တီနှင့်တွေ့လျှင်စကားပြောအဆင်ချောပါ့မလားဟူသော အတွေးသည် ကျွန်တော့်အားများစွာပင်ပူပန်စေခဲ့ပါသည်။ ကားပေါ်တွင် စီးနင်းလာရသောလမ်းတစ်လျောက်သည်လည်း အိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစွာလိုက်ပါခဲ့ရပါသည်။ ဒီလိုနှင့် အန်တီ့အိမ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ငါးယောက်ခန့်ရှိသောလူများအနက် အဆိုတော်လင်းလင်းနှင့် အန်တီ့ဘေးနားအမြဲပါနေသော ပေါင်ချိန်အသေးစားကဲ့သို့သောဦးကြီးကို မှတ်မိလိုက်ပါသည်။ အန်တီက ဧည့်ခန်းတွင်ရှိနေပါသည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးဖွင့်ပြီး ရုတ်တရက် သူမကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါ ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းဖြစ်ပြီး ထူပူသွားပါသည်။ “တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အန်တီခင်ဗျာ… သား ဖိုးလပြည့်ပါ” ဟုအန်တီ၏မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြောကာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ အန်တီကလည်း တွေ့ရတာဝမ်းသာကြောင်းပြန်ပြောကာ ကျွန်တော့်ကိုထမင်းစားစားပွဲတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်စေပြီး အခြားလူများမရှိစေဘဲ စကားဝိုင်းစတင်ခဲ့ပါသည်။ ထူပူစိတ်လှုပ်ရှားနေသောကျွန်တော့်၏ ပထမ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကစကားများသည် ‘တွေ့ရတာဝမ်းသာကြောင်း‘ များဖြင့်သာဖန်တရာထပ်နေပြီး ဒါကိုရိပ်မိသောအန်တီကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဖိအားလျော့သွားစေရန် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံပြောဆိုပေးခဲ့ပါသည်။
အန်တီနှင့် တစ်နာရီခွဲခန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထင်တာထက် အများကြီးအဆင်ပြေခဲ့၍ ကြည်နူးစွာပင် အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့နေ့လည်တွင် အဖိုးကိုလည်း အန်တီ၏သဘောထားများကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးနောက် လူကြီးက ‘တိုင်းပြည်အတွက်သားရွှေအိုးထမ်းကိန်းကြုံလေပြီ‘ ဟုပြောကြားခဲ့လေရာ ကျွန်တော်လည်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး အဆင်ပြေတော့မည်ဟု အလွန်ပင်တွေးတောဝမ်းမြောက်ပြီး ထိုနေရာတွင်ပင် အဖိုးကို ဦးသုံးကြိမ်ချရှိခိုးကန်တော့ခဲ့ပါသည်။
ဤစာ၌ပထမတစ်ချက်အနေဖြင့် အန်တီနှင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများအနက် ‘ထောက်ခံအားပေးသူနှင့် နောက်လိုက်များ‘ (Supporters & Followers) အကြောင်းထပ်မံတင်ပြလိုပါသည်။
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပစဉ်ကာလအတွင်း အနီအစိမ်း ထောက်ခံသူများအချင်းချင်း အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရင်းနှီးသူများလည်းစိတ်ဝမ်းကွဲရ၊ မိတ်ဆွေများလည်း အယုံကြည်ပျက်ရဖြင့် ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိသော ရလဒ်များဖြင့် ပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမုန်းတီးမများဖြင့်သာ အဖတ်တင်ခဲ့ရပါသည်။ ဒီကိစ္စသည် မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခပေါင်းများစွာများထဲမှ သာဓကတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ခု တည်ထောင်ရာတွင် ခေါင်းဆောင်ချည်းဦးဆောင်နေ၍မရပါ။ တိုင်းပြည်ဦးဆောင်သူများဘယ်လောက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ပြည်သူများက မညီမညွတ်စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေပါက ဘယ်လိုမှရှေ့သို့သွားနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ဟင်္သာကိုးသောင်းဇာတ်ပျက်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးနှင့်သာကြုံတွေ့နိုင်သည်ကို သတိမူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ယခုကဲ့သို့နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များက တိုင်းသူပြည်သားများ၏နောင်အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားအတွက် စံပြအတုယူဖွယ်ရာပြန်လည်စည်းလုံးချစ်ကြည်နေစဉ်တွင် ကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်များအားလုံးက မရှိခဲ့သောအငြိုးအတေးများကိုဖယ်ရှား သွေးထိုးခဲ့သောကောလဟလများကို နားမယောင်ဘဲ ခေါင်းဆောင်များ၏ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ ချစ်ကြည်စည်းလုံးစွာလိုက်ပါရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ဤနေရာမှနေ၍ပြည်သူများအားလုံးသို့ ရိုကျိုးစွာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါသည်။
ဒုတိယတစ်ချက်က သတင်းမီဒီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။မီဒီယာများသည်ပြည်သူလူထု၏ အတွေးအခေါ်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့်အလျောက် ယခုကဲ့သို့နှစ်ဘက်လူကြီးများပြန်လည်ပေါင်းစည်းသင့်မြတ်နေချိန်တွင် ကျွန်တော့်ထံလာရောက်ဆက်သွယ်ကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများဖြစ်ကြသည့် BBC, VOA, RFA, DVB, China Xinhua, Reuters,7Days, Mizzima, The Voice, Popular, Messenger, သံတော်ဆင့်, ပြည်မြန်မာ အပါအဝင်မီဒီယာအားလုံးကိုလည်း အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းများရေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို တစ်တပ်တစ်အားကူညီဆောင်ရွက်ပါရန် ခင်မင်စွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ လူကြီးနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံမှုကို မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုသော်လည်း အခွင့်အရေးမရခဲ့၍ ခေါင်းဆောင်သုံးဦး အမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးထားသော ငွေစက္ကူလေးကိုအမှတ်တရဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ထိုငွေစက္ကူလေး၏ထူးခြားချက်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားသောလူကြီးများအားလုံးသည် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေချိန် (သို့) အကြီးအကဲဖြစ်တော့မည့်အချိန်တွင်သာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မိသားစုတစ်စုတွင်ဖခင်သဖွယ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုယူရသည့်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်နှင့် မိခင်ကဲ့သို့သောပြည်သူကိုပြုစုပျိုးထောင်ရမည့် လူထုခေါင်းဆောင်တို့က မိမိတို့သည်တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်အူတုံတည်းဆင်းသည့် သားချင်းများဖြစ်သည်ကိုမေ့လျော့ကာ အချင်းချင်း အပြင်းအထန်ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် သားသမီးများသဖွယ်ဖြစ်သော တိုင်းသူပြည်သားများမှာ ညှိုးငယ်သောမျက်နှာ၊ သိမ်ငယ်သောစိတ်ထားတို့ဖြင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့ရပါသည်။ အမျိုးများသဖွယ်ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကလည်း ညီညွတ်မှုမရှိခဲ့ကြသည့်အပြင် အိမ်နီးချင်းသဖွယ်ဖြစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများကလည်း အချောင်ရဖို့လောက်သာစောင့်ကြည့်နေပြီး ရပ်ကွက်လူကြီးများသဖွယ်ဖြစ်သော အနောက်နိုင်ငံများကလည်း ဖိအားပေးဖို့လောက်သာချောင်းနေသည့်အတွက် မိဘသဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမညီမညွတ်ထပ်ဖြစ်နေပါက မြန်မာနိုင်ငံဟူသောမိသားစုကြီးသည် ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက်နက်ဖို့သာရှိပါတော့သည်။ ဒီအခြေအနေဆိုးရောက်မလာအောင် ကာကွယ်ရန်ပြည်သူများအားလုံးကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဆိုးလာသော တိုင်းပြည်ကံဇာတာသည်လည်း အကောင်းဘက်သို့ဦးတည်လာပြီဖြစ်သည်။
စာဖတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့… ယခုအခါတိုင်းပြည်အကြီးအကဲများသည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့၏ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုလျက် မာန်မာနများဘေးချ၍ ရင်းရင်းနှီးနှီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ကောင်းရာကောင်းကျိုးသယ်ပိုးထမ်းရွက်ခဲ့သည်ကို အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြည်နူးချမ်းမြေ့စွာဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုးတာဝန်များ ဆထက်တိုး၍ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားများကလည်း စည်းစည်းလုံးလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပူးပေါင်းကြိုးစားကြပါလျှင် ကျွန်တော်တို့အားလုံမျှော်လင့်နေရသည့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးသည် မဝေးကွာလှသောလက်တစ်ကမ်းအလိုတွင်ပင်ရောက်ရှိနေပါပြီဟုတိုက်တွန်းပြောကြားရင်း ကျွန်တော်၏စာကိုလည်း ဤနေရာတွင်ပင် အဆုံးသတ်နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။
3 Responses to ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ငြိမ်း) နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း
Catwoman on December 6, 2015 at 5:49 pm
Should we get revenge on them like they do in hunger games? Do they deserve it? After what they have done. That s the question
khin naing on December 7, 2015 at 12:27 pm
Murann Ezine on December 9, 2015 at 4:42 am
ဦးခင်ညွန့် ရှိစဉ်က (၂)ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓါတ်များကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ယခု အနှစ်၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အင်အယ်ဒီပါတီ အောက်ခြေအဆင့်ကနေ စတင်ကြိုးစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ယခင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်း ရရှိအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ အသက်၇၀ အရွယ် ဖြစ်ပေမဲ့ အားယူရဲရင့်တဲ့စိတ်ထားကြောင့် ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းကြီး ဦးသန်းရွှေ နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံး စောာင့်ကြည့်ရပါတယ်။ တယောက်သောသူကြောင့် လောကကြီးပျက်စီးရတယ် (အာဒံရဲ့ အပြစ်)၊ တယောက်သောသူရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကြောင့် လောကအလင်းရခဲ့တယ် (ယေရှုရဲ့အသွေးတော်)။
အလားတူပါပဲ… တယောက်သောသူကြောင့် (ဦးနေဝင်း) မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးခဲ့ရပြီး၊ အခု တယောက်သောသူကြောင့် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) မြန်မာနိုင်ငံကို ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြကြံဆောင်တဲ့အခါ ဝိုင်းဝိုင်းပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်။